I-UMI NO URUOISO entsha evela ku-Kracie iyimbangela yobuhle namandla kusuka ekujuleni kolwandle!
Ukunakwa, sinikeza izipho!
Ungathola isethi yamathuluzi amabili we-UMI NO URUOISO njengesipho uma ubhala ngathi, izinwele zakho nokukhathalela okuthandayo kusho! Abalobi abangu-40 bezincwadi ezithakazelisayo kakhulu bazothola isethi yamathuluzi amabili UMI NO URUOISO. Silinde izinhlamvu zakho kusukela ngo-Ephreli 20 kuya ku-Meyi 30, futhi uhlu lwamakheli luzokwaziswa ngoJuni 1! Thumela izincwadi ekhelini: soldatova.m@nippon-cosme.ru
Ukwakhiwa okhethekile kwe-shampoos yokuvuselela kanye nezimo ze-UMI NO URUOISO uchungechunge oluyingqayizivele lwabachwepheshe bezinhlamvu zikaKracie. Amanzi asolwandle olwandle kanye nezinhlobo ezingu-11 zolwandle olwandle olwandle, ama-vithamini acebile nama-amino acids, anikeze umthelela omkhulu ekunakekeleni izinwele - azibandakanyi nje kuphela ukugcoba nokugcoba ama-cuticles, kodwa benza izinwele zibe nempilo enhle futhi ziqinile!
Ngo-2014, ochwepheshe be-Kracie bavuselela ifomula yochungechunge, beliqinisa ngeqhaza lezinguquko - okuyinhloko yobuhle namandla okusukela ekujuleni kolwandle, ukuhlanganisa izinto ezinjengezinto ezidalwa njengama-marine collagen, ama-sea squalene, amafutha ase-Atlantic. Ngena phambili ekujuleni koboya bezinwele, lo mthombo izikhathi eziningana kuqinisa umphumela omuhle wezingxenye ezisele! Futhi ukuze uthole ukunakekelwa okuphumelelayo, ukuhlushwa kwamanzi okulwandle kanye nolwandle olunzulu kuwo wonke imikhiqizo ye-UMI NO URUOISO kwanda izikhathi ezingu-1.5!
Njengoba kubonakala: amabhodlela amahle (anezilinganiso ezinama-520 ml), elingisa imibala yolwandle olumnyama (i-emerald eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka-violet), njengokungathi bayatshela ngokubaluleka kwezingxenye zasolwandle zezinwele zezinwele
Indlela okusebenza ngayo: buyisela ukulinganisela phakathi kwezinwele, uqede umonakalo futhi unikeze ukuhluma okujulile.
Yini ephumayo: izinwele ezibucayi, ezibushelelezi, ezikhanyayo, "eziphilayo".
Ukubuyekeza okuvela kubasebenzisi (mayelana nochungechunge lwe-UMI NO URUOISO)
UJULIA , i-blogger yobuhle (eMoscow)
Ibhulogi "Imizwelo Yami Yobuhle"
"Ukupakisha kusho ukuthi ibhodlela elinamandla elinomthengisi, inani lemali liyi 500 ml kanti kubonakala sengathi lihlala njalo. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuguqula okuguqukayo, ngakho akudingekile ukuthenga ibhodlela njalo, ungamane uthenge amabhulokhi wokufaka esikhundleni, uphinde usebenzise futhi usebenzise okunye. Iphunga lemikhiqizo yezimonyo, hhayi ecasulayo, emva kokusebenza akuhlali ezinwele.
Shampoo UMI CHA URUOISO
Ukuthungwa kwalo kukhulu kakhulu, okumhlophe-okumhlophe, kuhle kakhulu ukuqubuzana, nginokuchofoza okubili ku-dispenser, ukuze imali iwanele ngokuphindiselela.
I-shampoo ihlanza izinwele kahle, ayifuni, ayiwomile, ayikho ithonya elibi. Efanelekayo isikhumba somzimba esomile (esasanda kuqala ukuhlupheka kancane).
UMI CHA URUOISO u-rinse aid aid
Balm iqonde chic! Ngineqhafaza elilodwa ku-dispenser, okwenza ukusetshenziswa kukhono kakhulu. Ukuthungwa kuyinto enhle kakhulu, i-beige, isakazeka kalula futhi ngokushesha ngezinwele, ngaso leso sikhathi kuyabanika ubumnene nobumnene. "
OLGA ZHILINA , owayengu-editor of Cosmopolitan, intatheli kanye nomlobi webhulogi ethi "I-Perfect Asia" (eMoscow)
Shampoo kanye ne-balm isuse uMI CHA URUOISO
"Kukhona ibhodlela elinomthamo we-shampoo okungaphezu kwesigamu ilitha lama-ruble angu-844. Ngenani elilinganayo kulinganiselwa futhi kuhlanza ibhalisi. Ngiyavuma, ukubiza okuncane. Ama-shampoos aseJapane ayelokhu ejabulisa hhayi eshibhile, kodwa asebenza kahle ezinwele zami ezinzima zase-Asia futhi ngithanda ukukhokhela ikhwalithi.
Uhlanza umuthi we "5-ku", izinwele ezinde kunokujwayelekile akugciniwe futhi esikhundleni sokugeza okujwayelekile njalo ngezinsuku ezimbili, ngingakwazi kalula ukuphatha ama-sweaters amabili ngesonto. Hhayi, ngiyayithanda kanjani!
Amantombazane amaningi asempumalanga ayithandi ukunyathela izinwele ezinkulu. Kodwa ngenxa yalokhu ngiyavuma - kwakungekho ukulinganisa okhethekile. Izinwele ezibophayo zivele zibhebhetheke phezu kobude obude, zizwa zifinyelele kakhulu ekuthinteni, futhi ngisho nokuphela okuphelile kubonakala kubamba ndawonye. "
NATALIA , - ibhulogi yobuhle, oneminyaka engu-27 ubudala (eMoscow)
Ibhulogi: «Ubuhle be-MinoriBlog nokuphila komzimba»
"I-Shampoo e-Moisturizing Kracie Umi No Uruoi Sou - i-formula eyingqayizivele ye-shampoo esekelwe emanzini asemanzini ajulile kanye namaminerali asolwandle ilawula ibhalansi yangaphakathi, ihlanza ngokuphelele futhi inomphumela omuhle kuzo zonke izinhlobo zezinwele. Ngemuva kokusetshenziswa, izinwele zami zihlanzekile, zikhanya, zilula futhi zibushelelezi ngokwanele kangangokuthi angikudingi ngisho nemimoya yomoya. Ngendlela efanayo, emva kwalesi shampoo, izinwele zihlanjululwa, azigudli, azifakelwa amandla futhi zenziwe kalula. Ngemuva kwebusika, izinwele zami ezomile, zifuna kuphela ukunyusa, okunikeza le shampoo. "
"Ngokuyinhloko, ngiyisebenzisa njengemaski enomsoco, njll. Ngifaka i-balm enkulu emanzini ahlanzekile ahlanzekile bese ngibamba cishe imizuzu engu-15-20. Ngemuva kokusebenzisa i-conditioner, izinwele zihamba kahle futhi zikhanya. "
Izinwele eziqondile nezibushelelezi: yenza i-keratin yaseBrazil iqonde ekhaya
Indlela yokuqinisa izinwele: Amavithamini
Idayi eqhubekayo yoboya: umbala ophelele noma izinwele ezithintekayo?
Amakhambi omphakathi wezingxenye zezinwele
Amaski ezinwele zehlukaniswe ekhaya
I-Nicotinic acid: izinzuzo zezinwele nokusebenza ekhaya
Kunokuba ugeze izinwele?
Isaladi nge-rice noodle nemifino
Kunokuba kungenzeka ukufaka esikhundleni seParmesan
IJerusalema: umlingo wasendulo womoya ongcwele
I-Neuralgia: izimbangela, izimpawu kanye nokwelapha
Indlela yokulungisa izinwele ezimele ekhaya: zokupheka eziphumelelayo ezine
Izinzuzo zezempilo zokudlala i-badminton
Amakhambi wezokwelapha namajikijolo kwikhabhinethi yomuthi ekhaya
Kusho ukwandisa umsebenzi wobuchopho
Okuhlwabusayo futhi okuwusizo: izinketho ezinhlanu zokudla kwezingane
Izindlela zokupheka ezinhle zekhofi kusuka ku-cellulite
Sangria enewayini elimhlophe
Ukuphulukisa Amanzi: Ukubuyiswa kukaNkulunkulu
Kwenzekani izimpawu zemilingo nempawu?
Uthando oluhle lwamantombazane ashadile
Ungadla kanjani ngokuzila ukudla?
Indlela yokuqeqesha ukulahlekelwa isisindo
Intombazane ephelele lapho ebona umfana